Blogs - သန်းထောင်ပေါင်းများစွာ
လူနှင့်လူချင်းဆက်သွယ်မှုသည်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ရွေးချယ်ရေးကိုယ်စားလှယ်များနေရာချထားရန်လမ်းကြောင်းတစ်ခုကဲ့သို့ ပို၍ အခြေခံကျလာသည်။
COVID လွန်ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်၏အခန်းကဏ္။
အသင်းအများစုသည် COVID-19 post-XNUMX အပြီးစီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှုကိုအာမခံနိုင်ရန်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုများကိုစီစဉ်ခြင်းနှင့်ယူခြင်းအတွက်အခြေအနေများကိုစတင်အာရုံစိုက်လာကြသည်။ အသင်းအဖွဲ့များ ...
လန်ဒန်နည်းပညာကုမ္ပဏီသည် Post-lockdown တီထွင်မှုအတွက်£ 50k ထောက်ပံ့ငွေကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်
လန်ဒန်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအဖွဲ့တစ်ခုကကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားပြီးနောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုကူညီရန်£ 50k ဆုချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရသည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။
လှုပ်ရှားမှုစနစ်သည်အမှတ်အသားကို အခြေခံ၍ အကြောင်းပြချက်ကိုအခြေခံသည်။ လှုပ်ရှားမှုဗီဇာအတွက်ငွေတောင်းခံလွှာကိုကိုက်ညီစေရန်လူများသည်လျှောက်ထားသင့်သည်။
သြစတြေးလျသည်ပြည်မကြီးဖြစ်သည့်အဓိကနိုင်ငံဖြစ်သည်ကိုသင်သိပါသလော။ အမှန်စင်စစ်၎င်းသည်အမှန်တကယ်ပင်ဖြစ်သည်။ သြစတြေးလျသည် ...
ဆန်းသစ်တီထွင်မှု reception ည့်ခံခြင်းသည်အများပြည်သူနယ်ပယ်တွင်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအသစ်များကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်း၊
အဖွဲ့အစည်းများကလူလုပ်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုကိုမည်သို့အသုံးချသနည်း။ လူလုပ်သောကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှု (AI) သည်ပုံမှန်စီးပွားရေးအတွက်ပုံမှန်သုံးစွဲသည်။ အလုပ်ဖြစ်စဉ်မှ ...
Blockchain နှင့်အဆိုပါဥပဒေ: ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစည်းမျဉ်းများ
အကယ်၍ သင်သည်အသစ်ရောက်ရှိလာသောလူဖြစ်လျှင်၊ blockchain ၏စီးပွားရေးတွင်သင်၏ခြေကိုရွေ့။ မစိုက်နိုင်အောင်ရှာဖွေသည်။
နောက်ဆုံးပေါ် Blog Post
အမြဲတမ်း update လုပ်!
စီးပွားရေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဘဏ္Financeာရေး၊
အဘယ်ကြောင့် Fintech ကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အခုအချိန်မှာကြီးစွာသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်
အကောင့်များနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများအကြားဆက်နွယ်မှုသည်အလွန်ခိုင်မာလာသဖြင့် fintech ၏ကိုယ်ပိုင်နယ်မြေအဖြစ်သို့တက်လာသည်။
သြစတြေးလျကျွမ်းကျင်သောဗီဇာအတွက်လိုအပ်ချက်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် - အသက် - အသက် - ၄၅ နှစ်အောက်ရှိရမည်; အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား - ...
ကနေဒါသည်အမြဲတမ်းနေထိုင်ခွင့်အတွက်လျှောက်ထားရန်ဖိတ်ကြားချက် ၆၀၀ ကိုထုတ်ပေးသည်
သြဂုတ်လ ၁၉ ရက်နေ့တွင်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုလျှောက်ထားရန်ကနေဒါနိုင်ငံသည်၎င်း၏ ၁၆၀ ကြိမ်မြောက် Express Entry မဲနှိုက်မှုကိုကျင်းပခဲ့သည်။
နယူးဇီလန်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအသစ် - ဗီဇာထုတ်ယူခြင်းအတွက် ဦး စားပေးအသစ်များ
လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနယူးဇီလန် (INZ) သည်ဗီဇာထုတ်ယူခြင်းအတွက် ဦး စားပေးအသစ်များသတ်မှတ်ထားသည်။ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ၀ န်ဆောင်မှုများကူညီပေးနေသည့်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက်စည်းမျဉ်းများလည်းရှိသည်။
တသမတ်တည်းဆိုရလျှင်ယူအေအီးအာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စုတွင်နေထိုင်သောostrကရာဇ်အမြောက်များစွာတို့သည်ကနေဒါသို့ပြောင်းရွှေ့ရန်လျှောက်ထားသည်။ တကယ်တော့, စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု ...
ကူးစက်ရောဂါသည်ကနေဒါလူ ဦး ရေ၏အများစုအတွက်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကိုကျဆင်းစေခဲ့သည်။
ကနေဒါနိုင်ငံသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခရီးသွားလာခွင့်ကိုရက် ၃၀ ထပ်တိုးသည်
coronavirus ကိုဆက်လက်ခြိမ်းခြောက်နေသောကြောင့်ကနေဒါသည် ၀ င်နိုင်ငံခြားခရီးသွားများအတွက်ခရီးသွားလာခွင့်ကိုနောက်ထပ်တစ်လထပ်မံတိုးချဲ့သည်။
Aye Finance မှကြွေးမြီရန်ပုံငွေတွင်ရူပီး ၁၈၀ ကျပ်တိုး
လူကြိုက်များသောအိန္ဒိယအခြေစိုက် fintech စတင်တည်ထောင်သူ Aye Finance သည်ကြွေးမြီရန်ပုံငွေကိုအပြီးသတ်နိုင်ခဲ့သည်။ Gurugram အခြေစိုက် fintech စတင်တည်ထောင်သူ Aye Finance သည် ...
Fintech Unicorn PingPong ငွေပေးချေခြင်းများ - Fighting Fraud ဆိုတာဘယ်တော့မှအဆုံးသတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ fintech စျေးကွက်သည်လျင်မြန်စွာကျယ်ပြန့်လာပြီး ၂၀၂၅ တွင်ဒေါ်လာ ၄၆၀ ဘီလီယံအထိရောက်ရှိလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသော်လည်းလိမ်လည်မှုစုစုပေါင်းဆုံးရှုံးမှုများ ...
အမေရိကန်စီးပွားရေးသည်အပတ်စဉ်ဒေါ်လာ ၆၀၀ အလုပ်လက်မဲ့ခံစားခွင့်မရှိဘဲနောက်ပြန်လှည့်သွားနိုင်သည်
ကြွယ်ဝချမ်းသာသူ Tilman Fertitta က CNBC သို့အင်္ဂါနေ့ကပြောကြားရာတွင်တစ်ပတ်လျှင်ဒေါ်လာ ၆၀၀ အစိုးရအလုပ်လက်မဲ့ဖြည့်စွက်မှုသည်အမေရိကန်အားအဟန့်အတားဖြစ်စေသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၏အဓိကအကျိုးကျေးဇူး (၆) ချက်ကားအဘယ်နည်း။
အဘယ်ကြောင့်ဘဏ္Financeာရေးနှင့်စာရင်းကိုင်န်ဆောင်မှုများ outsource ရန်အရေးကြီးသနည်း
စာရင်းအင်းပြင်ပလွှဲပြောင်းခြင်းဆိုသည်မှာတတိယပါတီအကြံပေးနှင့်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုက ၄ င်းတို့၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသို့မဟုတ်အပြည့်အဝလွှဲပြောင်းရန်အတွက်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသောစာချုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ထိပ်တန်း fintech ကုမ္ပဏီများသည်ငွေမည်မျှမြှောက်ထားသနည်း။
Fintech အဖွဲ့အစည်းများသည်သူတို့၏ရန်ပုံငွေဖြင့်နောက်ပြောင်နေခြင်းမဟုတ်ပါ။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းရိုးရှင်းစွာပြောရရင် Ant Financial ဆိုတဲ့တရုတ်ငွေကြေးနဂါးကိုယူပါ။
ကျောင်းပိတ်ပစ်မှုကြောင့်အမေရိကန်စီးပွားရေးသည်ဒေါ်လာ ၁၅ ထရီလီယံထိခိုက်ခဲ့သည်
Coronavirus အပြီးတွင်စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့ (OECD) ကကလေးများကျောင်းပြတ်တောက်မှုအားသတိပေးခဲ့သည်။
မြောက်အမေရိကလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ (ဖ်) ဝဲစျေးကွက်
မြောက်အမေရိကလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ၏ကြော်ငြာရည်ရွယ်ချက်သည်စက်မှုလုပ်ငန်းကိုပြင်းထန်စွာစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖြစ်သည်။
လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်သည် ၀ န်ထမ်းများ၏နေ့စဉ်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုကိုမဖြစ်မနေအသုံးပြုရန်ရှင်းလင်းထားသည်
Rochester တက္ကသိုလ်မှလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုကြီးကြပ်ပေးသော Anthony Kinslow သည်အောက်တိုဘာဂျော့တောင်းတွင်အလားတူအခန်းကဏ္ at မှပါဝင်လိမ့်မည်။
McDonald's မှအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဟောင်း၏ဖြစ်နိုင်ဖွယ်အပြုအမူများကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတိုးချဲ့ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ၏ဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့သည်အပြင်ဘက်ကိုငှားရမ်းခဲ့သည်။
လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်လုပ်ဆောင်ချက်သည်အဖွဲ့အစည်းများတွင်“ လူသားဆက်သွယ်မှု” တည်ဆောက်ခြင်း၏ထူးခြားသောအခန်းကဏ္ for အတွက်အမြဲဂုဏ်ယူသည်။
Market Study Report တွင်ပါ ၀ င်သည့်“ HR Software Market” သုတေသနအစီရင်ခံစာသည်လက်ရှိစီးပွားရေးကဏ္ business နှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်ကျသောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်သည်။
စီးပွားရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေး၏ Times သတင်းစာများတွင် HR Reinventing
ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော Covid-19 ကပ်ရောဂါသည်အဖွဲ့အစည်းတိုင်းအပေါ်နက်ရှိုင်းသောစီးပွားရေးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ နှင့်ကဏ္ every တိုင်းနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းများကသူ့ဟာသူပြင်ဆင်ထား ...
အမေရိကန်အစိုးရ၏ H1-B ဗီဇာအပါအ ၀ င်ကွဲပြားခြားနားသော visit ည့်သည်များအထူးဗီဇာများကိုယာယီရပ်ဆိုင်းလိုသည့် Donald Trump မောင်းနှင်သည့်အစီရင်ခံစာများသည် ...
virtual fit နည်းပညာသည်အဆင့်မြင့်။ သင့်လျော်သောအခန်းများကိုအစားထိုးနိုင်ပါသလား။
တစ်ချိန်ကအွန်လိုင်းမှထုတ်ပယ်လိုက်သော virtual fit အတွက်အလျင်အမြန်ဖြေရှင်းရန်အရေးတကြီးလိုအပ်မှုကကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားသောစတိုးဆိုင်များသို့တိုးချဲ့ခဲ့သည်။
AIOps အလေ့အကျင့်ကိုတိုးချဲ့ရန် Moogsoft နှင့်အတူ World Wide Technology Partners
Moogsoft သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအိုင်တီစစ်ဆင်ရေး (AIOps) နှင့် World Wide Technology (WWT) အတွက်လူလုပ်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှု၏ရှေ့ဆောင်နှင့်မောင်းနှင်သူဖြစ်သည်။
Mastercard သည်ဥရောပ၌ Fintech Express ကိုစတင်ခဲ့သည်
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအရစ်ကျကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်အဆင့်မြင့်မောင်းနှင်မှုကိုအာရုံစိုက်ရန်၎င်း၏ fintech နှင့် startup အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပို့ခဲ့သည်ဟုအစီရင်ခံခဲ့သည်။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချဲ့ထွင်မှုအတွက်လန်ဒန် fintech စတင်ဖွင့်လှစ်မှုသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၅၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချဲ့ထွင်မှုအတွက်ဒေါ်လာသန်း ၅၀ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအလှည့်အပြောင်းတစ်ခုပြီးစီးမည်ဟုလန်ဒန်ရှိ fintech ကုမ္ပဏီတစ်ခုကကြေငြာခဲ့သည်။ ComplyAdvantage ကကြေငြာနေသည် ...
အမေရိကန်၏စတော့ရှယ်ယာများသည်တနင်္လာနေ့တွင်မြင့်တက်ခဲ့ပြီး ၇ ရက်ကြာလမ်းလျှောက်ရန်စျေးကစားသူများအနေဖြင့်ထင်ရှားသောနည်းပညာအမည်များကိုကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့သည်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှနိုင်ငံများ၏ကျန်းမာရေးအချက်အလက်တိုးတက်စေရန်ကူညီမည့် WHO ၏နည်းပညာဆိုင်ရာအစီအစဉ်
WHO ၏ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးစာရင်းအင်း ၂၀၂၀ အစီရင်ခံစာတွင်ဖော်ပြထားသောသတင်းအချက်အလက်ရရှိနိုင်မှုအခက်အခဲများကြောင့် SCORE သည်ပိုမိုပါ ၀ င်သည်။
အမေဇုံက Halo ၏စမတ်ကျန်းမာရေး ၀ န်ဆောင်မှုအစီအစဉ်ကိုပွဲထုတ်ခဲ့သည်
အမေဇုံတွင် Halo ဟုခေါ်သောယနေ့ခေတ်တွင်လူတစ် ဦး ချင်းစီ၏ကျန်းမာရေးနှင့်ကျန်းမာရေးကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်ထည့်သွင်းထားသောပါဝင်မှုအစီအစဉ်သစ်ကိုတင်ပြခဲ့သည်။
လူ့ ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ဘဝသိပ္ပံလုပ်ငန်းများသည်လမ်းညွှန်ချက်များများပြားလွန်းခြင်း၊ ဆန့်ကျင်ဘက်ဒေါင်လိုက်အနံများကြောင့် ...
ကနျြးမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအသွင်ပြောင်းဖို့ AI ကိုလျှောက်ထားစတင်
စက်သင်ယူမှုနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုသည်များစွာသောအားဖြင့်တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက်အထူးသင့်တော်သည်။ အဓိကကျသောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအများစုမှာ ...
မလေးရှား၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကဏ္: - အာဆီယံတွင်မြင့်တက်သောကုမ္ပဏီကြီး
မလေးရှားသည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးရှိလူသိများသောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမူဘောင်ကိုရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။ အောင်မြင်မှု ...
၂၀၂၀ ကျန်းမာရေးသုတေသနကောင်စီ၏ Otago အတွက်ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအောင်မြင်ခြင်း
University of Otago ၏အကြံပြုချက် ၁၀ ချက်အားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာသုတေသနကောင်စီ (HRC) မှကျန်းမာရေး ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအသစ်မှတစ်ဆင့်ထောက်ပံ့ငွေပေးခဲ့သည်။
Coronavirus ကူးစက်မှုသည် ၁၀၀၀၀၀ ကိုဖြတ်ကျော်သွားသောအခါကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပြrisနာကိုနီပေါနိုင်ငံမှသတိပေးလိုက်သည်
COVID-19 ပြန့်နှံ့နေသောနီပေါနိုင်ငံ၊ နီပေါနိုင်ငံ၊ COVID-XNUMX ပြန့်နှံ့နေသောအလယ်အလတ်ယာဉ်တစ်စီးမှလမ်းဆီသို့ပိုးသတ်ဆေးကိုသုတ်လိမ်းထားသည်။
၂.၂၀၂၀ တွင်မြင့်တက်နိုင်သောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ၂ ခု
အဆင့်မြင့်အွန်လိုင်းပညာရေး module တစ်ခုကိုတည်ဆောက်ရန် HashCash
အဝေးမှသင်ကြားပို့ချမှုများကိုကမ္ဘာကမြန်မြန်ဆန်ဆန်လုပ်ဆောင်လာသည်နှင့်အမျှ HashCash အတိုင်ပင်ခံသည်ယူအက်စ်ရှိကမ္ဘာချီကောလိပ်နှင့်ပူးပေါင်းပြီး ...
UMB အကယ်ဒမီအသစ်သည် ဆက်လက်၍ ဆက်လက်သင်ကြားရန်အတွက်အားလုံးသွားသည်
ALL ၏မစ်ရှင်သည်ကျန်းမာရေးနှင့်လူသား ၀ န်ဆောင်မှုဆိုင်ရာပညာရေးအကြောင်းအရာများကိုဖန်တီးရန်နှင့်တင်ပြရန်ဖြစ်သည်။
အရှေ့တောင်အာရှသည်လေကြောင်းဆိုင်ရာပညာရေးထောက်ပံ့ငွေဒေါ်လာ ၆၅၀၀ ရရှိသည်
အရှေ့တောင်ပိုင်းဥက္ကလာဟိုးမားပြည်နယ်တက္ကသိုလ်မှလေယာဉ်နှင့်လေကြောင်းပညာပေးအစီအစဉ်အတွက်ဒေါ်လာ ၆၅၀၀ မှထောက်ပံ့ငွေကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။
သူအိုင်ဒါဟိုပြည်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့သည်ပျမ်းမျှနေ့စဉ်တက်ရောက်မှု (ADA) အားမည်သို့တင်ပြသည်ကိုအဆိုပြုထားသောယာယီစည်းမျဉ်းပြောင်းလဲမှုကိုအတည်ပြုခဲ့သည်။
Pack Education မှ Alabama ရှိကောလိပ်ကျောင်းသားများကိုထောက်ပံ့ရန် Ignite pilot ကိုစတင်ခဲ့သည်
ဒစ်ဂျစ်တယ်ပညာရေးဆိုင်ရာနည်းပြကုမ္ပဏီ Pack Education နှင့် ၄ င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်ယနေ့ခေတ်တွင် Pack Pack မှ Ignite Powered မှထုတ်ဝေသည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။
မြောက်အမေရိကပညာရေးနှင့်လေ့လာရေး Analytics မှ
မြောက်အမေရိကရှိပညာရေးနှင့်လေ့လာသင်ယူမှုဆိုင်ရာလေ့လာဆန်းစစ်မှုဈေးကွက်သည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁,၂၄၅.၆ သန်းမှ ...
အွန်လိုင်းပညာရေး - အကောင်းဆုံးအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်နိုင်သော E-learning Web Apps
coronavirus ပိတ်ဆို့ခြင်းသည်ပုံမှန်ကျောင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုဆိုင်ရာကျောင်းသားများတည်ရှိမှုကိုလွှမ်းမိုးသည့် အချိန်မှစ၍ အွန်လိုင်းညွှန်ကြားချက်သည် ...
US Department of Education မှကျောင်းသားများအတွက်အာကာသစခန်း၏စိန်ခေါ်မှုကိုကြေငြာခဲ့သည်
ယူအက်စ်ပညာရေးဌာနသည် CTE မစ်ရှင် CubeSat ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ကျောင်းသားများအားနည်းပညာကျွမ်းကျင်မှုများတည်ဆောက်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးသည့်နိုင်ငံ့စိန်ခေါ်မှု ...
ခေတ်သစ်နည်းပညာဖြင့်ဖက်ရှင်ပညာရေးကိုနည်းလမ်း ၅ ခုပြင်ဆင်မည်
အွန်လိုင်းစာသင်ခန်းများသည်လက်တွေ့ကျသောစွမ်းရည်ကိုရှာဖွေနေသောကျောင်းသားများအတွက်အထူးစိန်ခေါ်မှုများကိုတင်ပြသည် - သို့သော်တီထွင်ဖန်တီးမှုဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်များသည်မိုးကုပ်စက်ဝိုင်းတွင်ရှိနေသည်။ အချို့ ...